February 2022 - Siddhartha Post
सिओल सरकारले कोरियाको कृषिमा मौसमी कामदार र इजरायलको निर्माण क्षेत्रमा थप नेपालीलाई रोजगारीका अवसर दिन अध्ययन टोली गठन गरेर काम सुरु गरेको छ। कोरिया र इजरायलमा यसअघि पनि अन्य रोजगारीका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक गइरहेका छन्। इजरायलको केयरगिभर सेवा क्षेत्रमा हालै
सिओल रामेछापमा निर्माणाधीन ३ मेगावाटको सानो मिल्ती खोला जलविद्युत आयोजना अलपत्र पारेको भन्दै सेयरधनीहरूले विरोध जनाएका छन्। रिपोर्टर्स क्लबमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा सेयरधनीहरूले मिल्ती खोला हाइड्रो पावर कम्पनीलाई विदेशमा पसिना बगाएका मजदुरहरूको लगानी डुबाउन खोजेको आरोप लगाएका हुन्। ६ वर्षअघि
‘हानवोक’ आफ्नो भएको देखाएपछी चिन संग कोरिया रिसायो !
सिओल दक्षिण कोरियाका विभिन्न परम्परागत संस्कृतिलाई चीनले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ जसका कारण यि दुइ देश बिच बेला बेलामा असमझदारी बढ्ने गरेको पाइन्छ। कोरियाका परम्परागत खाना, कपडा, संगित लगायतका कुराहरुमा चीनले बेला बेलामा आफ्नो दाबी पेश गर्ने गरेको
कोरियाबाट फर्केर टि प्याकेजिङ्ग उधोगमा लगानी,मनग्गे आम्दानी !
सिओल धरान-३ का राजन श्रेष्ठ, धरान-२ का नविन सैजु र धरान-७ का विश्वमोहन पलिखे पढ्दादेखिकै मिल्ने साथी थिए । सँगै हिँड्ने, सँगै सहकार्य गर्नेलगायतको कार्य पनि उनीहरुबीच हुँदै थियो । तर उनीहरुमध्ये नविन भने ८ वर्षअघि कोरिया हान्निए । रोजगार